Mana Murtii irraa namni haqaa eguu jira natti hinfakkaattu. guyyaa gargaaratti maliif dhiyyeessa? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosMana Murtii irraa namni haqaa eguu jira natti hinfakkaattu. guyyaa gargaaratti maliif dhiyyeessa?
ajjeesuuf Jecha Manatti itti dhufanii Oromoon Biyyattii guutuu keeysatti Bahee Oromoonni 95 Wareegamuun hedduun Madaahanii akka turan namuu ni yaadanna!.
Amma immoo Haacaaluu Ajjeesanii Biyyattii guutuu Keeysatti Hokkorri kaanaan “Eegdota Jawartu Poolisii nurraa ajjeese, ABO Shaneeniis Harka keeysa qabdi’ yaada jedhuun Jawar faa irratti Himannaa banan. Oromoota ajjeechaa Jawar dura dhaabbatan keeysaa 95nan kanaan dura itti Dhukkaasanii ajjeesaniis Jawartu ajjeese ilaalcha jedhuun Himannaa isaanii Jabeeysanii dubbatu. Ifii itti dhukkaasanii ajjeesanii, Ifii Qawwee Mana keeysa kaayanii Maqaa ajjechaa fii Meeshaa Seeraan alaatiin himannaa Jawar, Baqqalaa,Hamza Borana irratti banani jiran.
Gooticha keenya Haacaaluus ifiif ajjeesanii Ifumaaf Osoo Ummanni Oromoo hin Awwaallatin Awwaalaniiti jiran.
Galgala Hacee ajjeesan irraa Jalqabee Networkii Cufanii waan jiraniif Oromoonni ajjeefaman Lakkoofsi qabatamaan nu bira gehuu hin dandeenye tahuus Odeeyfannoo haga ammaatti arganneen Oromoonni lakkoofsi isaanii 110 ol tahuu ajjeefamanii hedduun madaawanii Mana yaalaa jiru. Oromiyaan Afaan Qawwee fii Waranaan dhigaati jirti.
Kanaaf nu Warri Diaspora jirru Diinagdee, Hiriiraa, Midiyaalee jiraniif Statement qopheeysuun Bora dhaabbachuu qabna. Warri Minnesota fii UK Jiran fakkeenya Diaspora bakka biraaniif nuu tahuu qaban. Yeroo yeroo Manatti gallee rafnuu miti Mudhii teeysan Hidhadhaa gadi bahaa!!.
BB$:Oromoon keessa fi alaan Qabsoo isaa Finiinsuu qofa falli jiru.
Mariii Aadde Seenaa Jimjimoo,Art. Beekkamaa Kadiir Sa’id fi obbo Tashitee Waaqoo waliin goone itti dhiyaadhaa.